“के परमेश्वरको अस्तित्व छ”? प्रश्न विपरित धेरै मानिसहरुले प्रश्न गरेका छन् कि येशू ख्रीष्टको अस्तित्व छ वा छैन। सामान्यतया यो स्वीकार गरियो कि येशू मानिसको रुपमा झण्डै २००० वर्षअगाडि यस पृथ्वीको इस्रायलमा आउनुभयो। विवाद यसरी शुरु हुन्छ जब येशूको परिचयको विषयमा छलफल गरिन्छ। लगभग सबै धर्मले यो शिक्षा दिन्छ कि येशू अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो वा असल शिक्षक वा परमेश्वरको मान्छे। समस्या यो हो, बाइबलले हामीलाई यो भन्छ कि येशू अगमवक्ता, असल शिक्षक अथवा परमेश्वरको मान्छेभन्दा पनि असिमित हुनुहुन्थ्यो।
सी.एस.लुईस ले उनका पुस्तक मियर क्रिश्चियानिटी मा निम्न कुराहरु लेखेका छन्: “म यहाँ कुनैपनि मानिसहरुलाई वास्तविक मुर्खतापूर्ण कुरा भन्न रोक्ने कोशिश गर्दैछु जसले [येशू ख्रीष्ट] बारेमा भन्दछ: म येशूलाई महान नैतिक शिक्षकको रुपमा स्वीकार्न तयार छु, तर म उहाँ परमेश्वर हुँ भन्ने दाबीलाई स्वीकार गर्दिन”। त्यो एउटा कुरा हो जसलाई हामीले भन्न सक्दैनौ। मान्छे जो केवल मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो र जे कुरा येशूले भन्नुभयो त्यो एउटा महान नैतिक शिक्षक ले भन्न सक्दैन। उहाँ या त एक पागल वक्ति हुनुहुन्थ्यो— त्यस स्तरमा जसले भने कि भन्छन् उहाँ आधा पकाएको अण्डा हो— वा सायद उहाँ नर्कको शैतान हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो चुनाव गर्नुहोस। सायद त्यो व्यक्ति जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थियो, र हुन्, वा अथवा कुनै मुर्ख मनिस वा कोही खराब मानिस। तपाईले उसको मुर्खताको लागि चुप गराउन सक्नुहुन्छ, तपाईले उसलाई थुक्न सक्नु हुन्छ वा तपाईले उसलाई शैतानको रुपमा मार्न सक्नुहुन्छ; अथवा उहाँको चरणमा परि उहाँलाई प्रभु र परमेश्वर भनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। तर अब उहाँ महान मानविय शिक्षक भएको बारेमा कुनै बेकारको कुरामा कुनै समर्थन गरेर नआऔं। उहाँले हामीलाई त्यो खुल्ला विकल्प छोड्नुभएको छैन। उहाँले त्यो बारेमा केहि अभिप्राय पनि राख्नुभएको छैन।
त्यसो भए, येशूले आफुलाई को हुँ भनि दाबी गर्नु भएको छ? उहाँ को भनि बाइबलले के भन्छ? पहिले, येशूको वचन हेरौँ यूहन्ना १०:३० मा, “म र पिता एकै हौं”। पहिलो झलकमा, यो देखिंदैन कि उहाँनै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनि दाबी गर्नुभएको। जे भएपनि, उहाँको भनाइमा यहूदीहरुको प्रतिक्रिया हेरौँ, “‘असल कामको लागि हामी तिमीलाई ढुंगाले हान्दैनौं, तर इश्वर-निन्दा गरेको कारणले, किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ’” (यूहन्ना १०:३३)। उहाँ परमेश्वर हुँ भनि दाबी गरेको येशूको भनाईलाई यहूदीहरुले बुझे। निम्न पदहरुमा यहूदीद्वारा भनेका कुरा येशूले कहिल्यै सच्याएन्न, “मैले परमेश्वर हुने दाबी गरेको होइन।” त्यसले यो संकेत गर्दछ कि येशूले साँच्चै उहाँ परमेश्वर हुनु भएको घोषणा गर्नु भयो, “म र पिता एकै हौं” (यूहन्ना १०:३०) यूहन्ना ८:५८ अर्को उदाहरण हो: “‘येशले तिनीहरुलाई भन्नभयो, साच्चै म तिमीहरुलाई भन्दछु, ‘अब्राहाम हुनुभन्दा अघिबाटै’ म छँदैछु!’” फेरि, प्रतिउत्तरमा, यहूदीहरुले ढुंगा उठाएर हिर्काउने कोशिष गर्छन् (यूहन्ना ८:५९)। येशूले आफ्नो परिचयको घोषणा गर्दै “म हुँ” यो चाँहि परमेश्वरको नाउँमा प्रत्यक्ष निवेदन जुन पुरानो करारको छ (प्रस्थान ३:१४)। किन यहूदीहरुले फेरि येशूलाई ढुंगाले हान्न चाहन्थे यदि उहाँले यस्तो केहि भन्नुभएको थिएन जुन कुराले परमेश्वरको निन्दा भएको तिनिहरुले विश्वास गरे, अर्थात्, म परमेश्वर हुँ भन्ने दाबी?
यूहन्ना १:१ ले भन्छकि, “वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो”। यूहन्ना १:१४ ले भन्छकि, “वचन देहधारी हुनुभयो”। यसले स्पष्ट संकेत गर्छकि येशूनै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। थोमा येशूको चेलाले येशूलाई स्पष्ट भन्यो, “मेरो प्रभु र मेरो परमेश्वर” (यूहन्ना २०:२८)। येशूले उसको कुरालाई सच्याउनु भएन। प्रेरित पावलले उहाको यसरी वर्णन गर्छन्, “...हाम्रो महान् परमेश्वर र मुक्तिदाता, येशू ख्रीष्ट” (तितस २:१३)। प्रेरित शिमोन पत्रुसले पनि उस्तै भन्छन्, “...हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता, येशू ख्रीष्ट” (२ पत्रुस १:१)। परमेश्वर पिता येशू ख्रीष्टको पूर्ण परिचयको गवाही हुनुहुन्छ, “तर पुत्रको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ, ‘ओ परमेश्वर, तपाईको सिंहासन अनन्त सम्मका लागि, र धार्मिकता तपाईको राज्यको मुकुट हुनेछ।’” पुरानो नियमको भविष्यवाणीहरुले येशूको ईश्वरत्व को घोषणा गर्दछ, “हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ , हाम्रो निन्ति छोरा दिइएको छ, र शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। र उहाँ अचम्मको सल्लाहकार कहलाइनुहुनेछ, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, शान्तिका राजकुमार"(यशैया९:६)।
त्यसैले जब, सी.एस.लुईस ले तर्क गरे, येशूलाई असल शिक्षक हुनुहुन्छ भनि विश्वास गर्नु यो एउटा बिकल्प होइन । येशूले स्पष्ट र इन्कार नगर्ने तरिकाले परमेश्वर हुँ भन्ने दाबी गर्नु भयो । यदि उहाँ परमेश्वर होइन भने, त्यसो भए उहाँ झुठा हुनुहुन्छ,र त्यसकारण उहाँ अगमवक्ता होइन, असल शिक्षक,अथवा परमेश्वरको मान्छे होइन । येशूको शब्दलाई व्याख्या गर्ने कोशिश गर्दे, आधुनिक “विद्धानहरु” यो दाबी गर्छन् कि ,“येशू ऐतिहासिक सत्य” ले उहाँको धेरै कुराहरु भनेको छैनन् जुन बाइबलमा उहाँले भन्नु भएको छ । हामी को हौ र परमेश्वरको वचनमा तर्क गर्ने येशुले के गर्नुभयो वा के गर्नुभएन भनेर? कसरी कोहि विद्धान् जो येशू को २००० वर्ष पछि आए र उनीमा कसरी येशूसँग बसेकाहरु भन्दा कसरी राम्रो अन्तरदृष्टि हुनसक्छ, जो स्वयंम येशुको शिक्षा प्राप्त गरेकाहरु यो कसरी भन्न सक्छन् येशुले के भन्नु भो वा भन्नु भएन(यूहन्ना १४:२६)?
किन येशू माथिको सत्य पहिचानको प्रश्न त्यति धेरै महत्वपुर्ण छ? किन येशूनै परमेश्वर हुन कि होइनन् भन्ने कुराले महत्वपुर्ण कारण हो?अति महत्वपुर्ण कारण येशू नै परमेश्वर हो भन्ने यो हो कि यदि उहाँको परमेश्वर नभएको भए,उहाँको मृत्युले पुरै संसारको पापका लागि चुकाउनुभएको मुल्य उपयुक्त हुदैनथ्यो (१यूहन्ना २:२) । मात्र परमेश्वरले साँचो अनन्तको दण्डको मुल्य चुकाउन सक्नुहुन्छ (रोमी ५:८,२ कोरिन्थी ५:२१)। येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण उहाले हाम्रो ऋणको मुल्य चुकाउन सक्नुभयो। येशू मानिस हुनुभएको थियो त्यसैले उहाँ मर्न सक्नुभयो। येशू ख्रीष्टमा मात्रै विश्वासद्वारा मुक्ती उपलब्ध छ।येशूको इश्वरत्व यही हो कि उहाँ एकमात्र मुक्तीको बाटो हुनुहुन्छ । येशूको इश्वरत्व यही हो जसकारण उहाँले यो धोषणा गर्नु भयो, बाटो, सत्य र जिवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्दैन”(यूहन्ना१४:६)।